Campagnolo ọ na-eme brek disc? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Campy diski brekị - azịza nye nsogbu ndị ahụ
Campy diski brekị - azịza nye nsogbu ndị ahụ
Campagnolo ọ na-eme brek disc?
Campagnolo bụlaunching yadiski breekin'ime ụdị atọ. All na-eji otu calipers na rotors; naanị ndị levers ahụ dị iche.Campagnolo bụLaunching ikediski breekinjikwa maka ụlọ ọrụ ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti etiti.Ọnwa Ise 9, 2017
Ọ dị mma, nabata na usoro ọzọ nke GCN Tech Clinic na-anwa idozi nsogbu ịgba ịnyịnya ígwè gị. Yabụ ọ bụrụ na inwere ihe na-emekpa gị ahụ na ịnweghị ike ị ga-apụ na igwe kwụ otu ebe gị, gbaa mbọ hapụ m ajụjụ a na ngalaba nkọwa dị n'okpuru, ma ọ bụ ọzọ na ụdị mgbasa ozi ọ bụla site na iji #ASKGCNTECH. Na enweghị oge ọzọ ka anyị bido n'ajụjụ mbụ nke izu a, ọ si na Yo Brobeans, ugbu a ha na-ekwu, 'Ọ masịrị m echiche ahụ' nke iji 10-ezé ezé mee ka ọtụtụ 'gia na nsọtụ abụọ' ga-eme crankset ahụ , yinye na kaseti ha na ihe ndi ozo si na otu di iche? Yabụ ị nwere ike were dratotrain site na SRAM n'ugwu igwe kwụ otu ebe ma jiri ya na mpaghara dị iche iche? 'Ọ bụrụ otú ahụ, aro ọ bụla?' Ngwongwo igwe kacha mma nke nwere diski hydraulic. 'Whoa, nri, ị naghị ajụ ihe' re, ị bụ, Yo Brobeans? Um, ee, echere m na ị nwere ike nweta ọrụ a.
Amaghị m na ihe igwe kwụ otu ebe nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma na ihe ndị dị n'okporo ụzọ n'ihi na ha nwere ọnụọgụ dị iche iche na eriri na niile n'ihi na nke ahụ bụ ihe ị na-agafe ebe ahụ. O doro anya na ịchọrọ iji nnyefe igwe na-arụ ọrụ na diski hydraulic diski ya mere ihe kachasị mkpa iji jide n'aka na ị nwere oghere azụ nke kwekọrọ na cassette nke nwere 10 ezé ezé ka ị ga-achọ onye ọkwọ ụgbọala XDR dakọtara n'ebe ahụ Freewheel, Echere m na ihe kachasị mfe maka gị ebe a bụ Campagnolo hydraulic raya derailleurs, mana o doro anya na ya na hydraulic diski brek. Nke a bụ ma eleghị anya ihe nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma, mana anwalebeghị m ya, mana ọ doro anya na ọ bụ ihe iji nye obere echiche maka na ọ bụ ọnọdụ dị mgbagwoju anya na ịkọwapụta.
Ọzọ bụ Avin Jansen, 'M hụrụ n'anya na-etinye na handlebar teepu, na m nwetara ya pụtara na m a ọkachamara na-arụ ụgbọ. 'Na m dị nnọọ nwetara a ọhụrụ igwe kwụ otu ebe na Di2', na Di2 nkwụsị igbe na njikwa, 'ihe ịtọ ya' bụ na njedebe nke aka. 'Olee otu m ga esi esi mee teepu aka m,' n'ihi na o nwere ihe nkpuchi bu 'Wraps around the end of the handlebar.' 'Biko nyere aka, otu isiokwu ga-adị mma.' Right Avin, ọ dịghị isiokwu dị mkpa Maka nke a, enyi m.
Dịka i kwuru, igbe nnweta Di2 a dị na njedebe nke aka ahụ nwere ihe mkpuchi plastik nke na - ese slide na mpụga nke njikwa ahụ. Ihe ikwesiri ime site na aka gị bụ iji nweta teepu duct dị ka o kwere mee ruo na njedebe, ihe fọrọ nke nta ka ọ banye n'ụdị nkedo plastik a, wee kechie teepu teepu dịka o kwere mee n'enweghị akwa ma ọ bụ na-agbaji ma ọ bụ na-agbaji aka ahụ teepu akwa. Ekwenyere m, ọ nwere ike ọ gaghị adị mma dịka ụdị mbụ nke otu ị si etinye teepu aka ebe ị nwere ntakịrị ntakịrị yichara ma gbanye ya ebe ahụ, mana nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ndị ọrụ ọkachamara niile nọ ebe ahụ na-eme.
Onye na-esote bụ Colin Jones. Ugbu a Colin na-ekwu, 'Ndewo Jon, ana m arụ ọtụtụ ọrụ na ịnyịnya ígwè ndị enyi, ndị a na-agbanye n'ime ha.' a di na nwunye nke ogologo tubing 'si m obodo igwe kwụ otu ebe ụlọ ahịa na-napụrụ anya nke ọhụrụ anyịnya igwe ha na-ewu nke igbe.' Nke ahụ na-eme ka ọrụ ahụ dịkwuo mfe, 'ya mere, m ga-achọ ịzụta ezigbo ogologo nke a,' mana enweghị m ụzọ m ga-esi mee ya mara ụdị nha, dayameta, ịchọ.
Ọ dị mma, nweta ihe nwere eriri nke dị n’ime mpe abụọ ma ọ dịkarịa ala abụọ. Yabụ ị nwere ike iji ya maka ma gree ma breeki ebe ọ bụ n'ezie mgbatị dị n'ime eriri USB dị ọtụtụ, m kwuru ọtụtụ dị gịrịgịrị, mana ọ bụ akụkụ pere mpe nke milimita karịa nke breeki igwe n'ime, yabụ gaa maka ihe dịka milimita abụọ , n'ihi na thickest dị n'ime ụlọ breeki USB ị ga-enweta nwere ike ịbụ ihe dịka 1.6 'millimeters.
Yabụ milimita abụọ n'ime. Ọ na-enye gị ohere zuru oke iji kwado ụdọ. Nyefee onye ọ bụla mpempe nke tubing dị n'ime ya dịka ndị mmadụ nwere omume ịghara ịlaghachi ihe.
Na-esote, anyị nwere ajụjụ site na ndị debanyere aha 1000 na-enweghị nsogbu ịma aka. Ọ bụ aha njirimara dị iche, ha na-ajụ, 'Hey Jon, Abụ m onye na-agba ọsọ obere' na achọrọ m mita asaa ma ọ bụ ihe dị n'okpuru 'Ntugharị maka Ihe Omume'. Yabụ ọ bụrụ na mmadụ amaghị maka ị na-agba ọsọ na ngalaba ndị ntorobịa na nke obere, ịnweghị ike iji akụrụngwa buru ibu n'oge asọmpi.
Ihe kpatara nke a bụ na ahụ gị na ọkpụkpụ n'ozuzu gị emepebeghị nke ọma yana ị nwere ike itinye ndụ na nrụgide ọzọ, yabụ otu iwu a dị. Ka o sina dị, laghachi n’ajụjụ ahụ. 'Ugbu a enwere m cassette 14-28' na akara 50/34. 'Agbakọọla m na achọrọ m eze eze nke iri abụọ na ise ka m wee wepụta ihe kwesịrị ekwesị', mana m na-ajụ ma m ka nwere ike idobe 'obere obere mgbanaka nke 34'. 'Ndi Ultegra 6700 derailleur m nwere ike idozi oghere ezé 18 n'etiti eriri m' ma ọ bụ na achọrọ m ịnweta nkedo ezé 36? 'Daalụ, Flynn.' Nke ziri ezi, ihe nkedo 34 ma ọ bụrụ na ị nwere ike ime nke ahụ na mgbanaka 52, ma ọ dị nwute na onye na-egbu gị agaghị enwe ike ijikwa ya nke ọma, ikekwe, amaghị m, atọ ma ọ bụ anọ nke siri ike gị obere mgbanaka, yabụ ọ bụrụ na ị nọ n'obere ihe na nke pere mpe n'azụ, agbụ ahụ ga-egweri ngere derailleur.
Ọ ga-eme nnukwu mkpọtụ. N'ezie gia ga-adị oke egwu kwa, yabụ, ihe kachasị mma ị ga - eme bụ iji aka gị tinye agịga ezé 36 yana 52 cog. Lelee anya gburugburu, n'agbanyeghị, n'ihi na ọ bụchaghị na ị ga-azụrụ ihe ị nwere ugbu a.
I nwere ike na-achọ ihe Aftermarket ọzọ nke ga-enyere gị aka dị ka nke ọma. Ọzọ na-abịa mikeylp03. Nri, ebe ahu ka anyi no. 'Ndewo Jon, hụ ihe nkiri a n'anya.' M na-eweghachite Trek 1000 ochie, 'ọ ga-amasị m ịgbanwe ya,' site na ngbanye ihe ntanetị asaa, 'gaa na ntinye ọsọ ọsọ ọsọ 10.' Ajuju m juru abuo. 'Ya mere, ị nwere ajụjụ abụọ n'ezie.' Enwere m ike itinye casset ọsọ 10? 'M tụrụ azụ azụ na-adị milimita 130, na abuo, ihe ntụgharị tube nwere ike ịdepụta maka gia 10 ga-aghọ? Daalụ. “Ozi ọma ebe a.
Nke ziri ezi, millimita 130 bụ ihe ịchọrọ maka gia 10 nke dị oke mma, naanị jide n'aka na cassette dabara na freewheel na ihe niile. Banyere gị mgbanwe, nke edepụtara maka gia 10, ee e, ọ dị mwute ikwu na ọ gaghị adị. Could nwere ike itinye ya na esemokwu ma ọ bụrụ na ndị na-agụ gia gị nwere ike ime nke ahụ, mana esemokwu esemokwu bụ ihe ọkụkụ na-efu.
Ọ bụ naanị ihe ọzọ ka ọgbaghara na ala ebe ahụ. Otú ọ dị, ozi ọma ahụ bụ na Shimano ka na-eme 10-ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ. Echere m na ọ bụ SL- 7900.
Enwetara m nke ahụ na Eddy Merck ochie m, nke m megharịrị ka ọ bụrụ nke oge a na-agba ịnyịnya ịgba ọsọ oge ochie, yabụ, ọ bụrụ na nke ahụ bụ uche ah, ọ ga-ekwe omume kpamkpam. Mee ya, ziga ya na igwe kwụ otu ebe. Nke ziri ezi, nke ọzọ bụ Al Val, onye kwuru: 'Ndewo si Barcelona'.
Ọ dị mma, 'Ekele m na canal' Ana m akwọ ụgbọala aluminium Cannondale CAADX 'Aga m edochi ndụdụ m nke alumini' na ndụdụ carbon 'M ga-enwe ekele maka ndụmọdụ na ịwụnye pikọpị mkpakọ n'ụzọ ziri ezi' Mkpụrụ carbon chọrọ? 'Rewgha torque?' Olee otú iji zere galvanic corrosion n'etiti etiti na ndụdụ? ”Ọ dị mma, dịkwa mma. Yabụ ị nwere ike itinye pasta carbon na gburugburu nke sterụ ahụ tupu ịtinye ihe mmasa ahụ. Emebeghị m ya mbụ.
Echeghị m na amaara m onye ọ bụla na-eme nke a, mana echere m na ọ gaghị emerụ ahụ. Banyere torque nke ịgbasa ịghasa ịghasa, ọ dabere na ihe ị na-eji. Yabụ, ụfọdụ n'ime ndị nwere ezigbo ọkụ, ha anaghị atụ aro ka ha sie ike, ebe ụfọdụ n'ime ndị siri ike na-atụ aro ruo mita asatọ Newton, kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, galvanic corrosion.
Ọfọn, ịkwesịrị ileba anya na mmezi gị, yabụ gbaa mbọ hụ na igwe kwụ otu ebe dị ọcha ma jiri griiz na mmanu mee ihe mgbe ọ dị mkpa. N'ezie, ọ bụrụ na ịmalite ọsụsọ n'ebe niile ị ga-enwe ntakịrị mmebi, ya mere, ee, dị njikere ịsacha igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Na-esote bụ Michael Ubi, na Michael na-ekwu, 'Jon, mgbe ọ na-arị ugwu na-efegharị igwe kwụ otu ebe site n'akụkụ ruo n'akụkụ, enwere m ike ịnụ' diski breeki n'ihu mgbe ọ na-ehulata.
Nke a ọ bụ nkịtị ka m nwere ike igbochi ya? M hiwere caliper na a bit nke flexin n'etiti a etiti na impeller, ma ọ bụ a ndụdụ na impeller, gị ikpe. Ihe dị mkpa ịtụle ebe a bụ na site na diski brek, ịnakwere ikike dị ike karịa na breeki rim ole na ole millimeters n'akụkụ abụọ nke rim ebe breeki breeki dị, ebe ya na diski breeki ọ dị ukwuu, sie ike nke ukwuu, yabụ enwere nghọtahie dị mfe ọ bụghị iced elu M na-ekwu, anyị na-anụ ya na rim brek oke, ọmụmaatụ. Na-emekarị ọtụtụ ihe ndị ọzọ mmiri mmiri ihu igwe karịa akọrọ ihu igwe.
Isi ihe ị ga-ekwu ebe a bụ na breeki diski gị nwere ike ịdị mkpa ịnwa ịnwa iji nweta piston ahụ kpamkpam. N'aka nke ọzọ, ọ nwere ike ịdị mkpa na ha ga-ehicha ntakịrị iji gbalịa ma nyere ha aka ịpụ na ịpụ. Naanị nye ya nnwale ya na ụfọdụ diski breeki Cleaner.
Mana ee, ọ bụghị nke ahụ nkịtị, mana ọ bụ ihe enwere ike ịhọrọ ya na onye nwere ezigbo ịnụ ntị dị ka gị. Nke ikpeazu na abia n'izu a site na Glenn Fullwood onye na - asi, 'Ndewo Jon, a na m atu anya na GCN Tech Clinic kwa izu.' Nke ahụ dị mma ịnụ, Glenn. 'M nwere kọmpat crankset, 50/34' nke bịara na Bianchi m. 'Ana m ebi na ndịda ọdịda anyanwụ Australia, ebe ọ fọrọ nke nta ka ọ dị ka pancake, mgbe niile na obere, '50 / 12, 50 / 13.' Ah, echere m na ha pụtara 34/12 ma ọ bụ 34/13 mana ọ bụ ihe a na-anabata. 'Ebe ọ bụ na echere m na nkedo ezé 34 bụ ihe efu,' enwere m ike ịgbanwe ya maka 42 ma ọ bụ 44? 'Ihe nkedo dị n'ime ya dị ka 44 anaghị arụ ọrụ na 50, ma ọ bụ na ọ bụghị nke ahụ? Ana m atụ anya ịnụ olu gị, Glenn. 'Glenn, akụkụ nke ụwa n'ụwa ebe ahụ n'Australia.
Ana m atụ anya nleta kwa afọ m kwa afọ. Ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma itinye mgbanaka dị n'ime 42 ma ọ bụ 44 ebe ahụ, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, ị ga-enwekwu mgbanwe na-agbanwe site na derailleur n'ihu gị. Rịba ama, na eriri ezé 44 n'ozuzu ya abụghị nke a na-ahụkarị ya mere o nwere ike isiri gị ike ịchọta, mana 42 ga-abụ ikuku nye gị, gbanwee nke ahụ, agaghịzi enwe obere ibe na iberibe gị aka nri, enwere m olileanya na m bụ enwe ike inyere gị aka ịza ma ọ bụ dozie nsogbu gị n'izu a.
Ọ bụrụ na ọ bụghị, biko hapụ m ya na nkọwa ngalaba n'okpuru iji # ASKGCNTECH na m ga-eme ike m niile iji mee ka ọ bụrụ iji zaa usoro ndị ọzọ. Dị ka oge niile, cheta isoro ndị enyi gị kerịta ma nwee mmasị na ha ma echefukwala ilele ụlọ ahịa GCN na shop.globalcyclingnetwork.com.
Ma ugbu a, maka edemede ukwu abụọ ọzọ, lee ka ị si enweta ebe a n'okpuru wee pịa ebe a n'okpuru.
Kedu ụdị ụdị diski brek atọ ahụ?
Otu akpọrọ 'piston megidere'pịnye diski breeki'nke nwere piston n'akụkụ abụọ nkediskirotor, nke ozo bu ‘sere n’elupịnye diski breeki'nke nwere piston na naanị otu akụkụ. Na-ese n'elu mmiripịnye diski breka na-akpọkwa ihe na-agba ọsọpịnye diski brek.
Diski brek kewaa echiche n'etiti ndị na-agba ịnyịnya ígwè. Na mkpokọta, ihe ị ga - ahụ bụ na ndị ji ha eme ihe na - ekwu okwu banyere ha, ebe ndị na - ekwu na ha enweghị isi. Ihe anyị nwere ike ikwu bụ na ebe ọ bụ na anyị na-agba ma na-agba ọsọ na brik brek ruo ọtụtụ afọ, ndị a adịchaghị mkpa.
Ma olee otú diski brekị jiri ya tụnyere elu brek na a carbon wheel dị ka nke a? Anyị enwere ike ịhụ ọdịiche? - Eeh. Ọ dị mfe ịkwụsị ngwa ngwa site na diski brek? Anyị ga-achọpụta. Anyị nwere ntọala abụọ yiri nke a ebe a, belụsọ na Dan na-eji Sram Red diski brek ma m na-eji Sram Red rim brek.
Ma ọ bụghị na taya bụ otu ihe ahụ na ịdị arọ anyị yiri nke ukwuu, gbakwunye ma ọ bụ buru pint stella na paị. - Eeh. Yabụ na ọ fọrọ nke nta ka anyị nwee otu ntọala ahazi belụsọ maka brekị, na ihe mụ na Sy ga-eme bụ ịnyagharị onwe anyị n'akụkụ na breeki dịka o kwere mee n'okporo ụzọ dị iche iche n'ọnọdụ dị iche iche wee jiri atụtụ brakị atụ anya - echere m na anyị ga- aga ebe ọzọ karịa n'ebe ndịda nke France, dan chọta ọnọdụ ndị ọzọ. - Ebee ka ị ga-atụ aro? Naanị ị laa n'ụlọ? ♪ ♪ - Dịka ị pụrụ ịhụ, anyị ga-ahapụrịrị ndịda France iji mezue edemede a.
Otú ọ dị, na akọrọ ọnọdụ, ihe dị iche n'etiti abụọ dị iche iche brek na-atụ anya ka ukwuu. Rim brek nwere ike dị ukwuu na ọtụtụ ngbanwe nke na-enye anyị ohere idalata ngwa ngwa - ee. Na diski na-enwe mmetụta dị mma karị, mana ọ bụghị ike na usoro mgbatị na-eme nnukwu ihe dị iche, ọ bụ ezie na ọ ka mma.
Mgbanwe ụda olu a na-enyere anyị aka iji ike karịa na mbara ala. Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụghị ikpe, anyị achọghị nnukwu traction, anyị na-eme ihe kachasị anyị nwere. Dị ka anyị hụrụ ugbu a, diski diski mere ka anyị belata ngwa ngwa na ọnọdụ kacha njọ.
Ma mgbe ọ dị mmiri, ha dị mma karịa - ee. Ngwongwo carbon ndị a na-eme nke ọma na mmiri, mana anyị nwere ike ịhụ na ha akachabeghị arụ ọrụ dị ka diski brek. Otu n'ime isi ihe kpatara nke a bụ na mpe mpe akwa chọrọ n'ezie iwepu mmiri site na elu rim ahụ iji mee ka brek rụọ ọrụ.
Na ebe ha bidoro ịta ụfụ, nke ọma, nke ahụ nwere ike ibute oge eserese, ọkachasị n’elu ebe na-amị amị. N'aka nke ọzọ, diski brek na-arụ ọrụ ka ha si arụ oge niile. Nke ahụ apụtaghị na ọ bụ ike, mana ọ ga-abụ na ọ ga-abụ n'ihi ụda olu ahụ.
Onye na-ejide ọnụ na-adọta n'etiti isi ihe mkpuchi breeki na-atụba rotor na mkpọchi rotor ka ukwuu. Nke ahụ pụtara na anyị na-enye taya ahụ ike karịa na ọ na-agbagha traction na ịwụli. Kedu ihe nke a pụtara maka mụ na gị, ndị na-aga n'okporo ụzọ kwa ụbọchị? Ọfọn, olile anya na ị gaghị eme ọtụtụ nkwụsị mberede dịka anyị chepụtara maka ule ndị a.
Dikwa n’udo, Sy? - Ee, ọ dị mma. Ndo. - Mana echere m na anyị niile nwere ike mụta ịhụ nkwekọ na amụma amụma nke brekị na ole na ole. - Eeh.
N'ezie ị nwere ike ịme na-enweghị ya, mana gịnị kpatara m ga-eji mee ya? Ugbu a n'ezie ọ bụ otu ihe inwe ezigbo brekị na igwe kwụ otu ebe. Iji ha nke ọma ma nweta ihe kacha mma n’ime ha bụ ihe ọzọ. Yabụ kedu ka ị lelee isiokwu anyị gbasara etu esi emebi igwe dị ka pro.
Nwere ike ịbanye n'elu site na ịpị ebe ahụ. Ma ọ bụ maka isiokwu ọzọ ebe anyị na-anwale ma ọ bụrụ na diski brek kwesịrị ekwesị maka Pro-Peloton, ma ọ bụ na Pro-Peloton nwere ike ịbụ n'ezie ihe kwesịrị ekwesị maka diski? Iji rute ebe ahụ, ị ​​nwere ike pịa ebe ahụ - ee, ma ọ bụrụ na ị bụghị onye debanyere aha na Global Cycling Network ọ bụ n'efu ma ihe niile ị ga - eme bụ pịa ebe ọ bụla na ihuenyo nwere Me na Sy. Echere m na ọtụtụ n'ime ha debanyere aha ya, ọ bụghị ya? Enwere ụfọdụ n'ime gị ndị anaghị edebanye aha. - Gịnị ka ị na-eche? - Anyị nwere ike ịsị ya.
Mba, anyị enweghị ike ikwu nke a - Mba, anyị enweghị ike. Naanị pịa ebe ahụ. Bịanụ.
Naanị mee ya. Na-eme ka uche. - Ziri ezi.
Ka anyị jiri nwayọ nwayọ.
Nwere ike ịgba ọsọ na diski brek?
UCI gosipụtara na nkwupụta mgbasa ozi ụnyaahụ nadiski breka ga-ikike iji ya mee ihe n'okporo ụzọ (na BMX)ọduọdịka nke July 1st, mgbe ọtụtụ afọ nke dabara na mbido nke hụrụ na ha kwadoro na usoro ikpe, machibido iwu nwa oge, wee kwado ya ọzọ.June 22. Ọkt 2018
Enwere diski brek na triathlons?
Diski brekbụ a laa.
Na-eso ụzọ nke InternationalTriathlonUnion ITU, onye kwadoro ijidiski brekmaka asọmpi na 2016, Ironman gakwereụzọ natriathlonanyịnya igwe kwadeberediskiigwe kwụ otu ebe na Ironman na ihe omume 70.3.Bọchị 28 2017
Moddị rim breeki breeki caliper anọnyerela anyị n'ọgbọ niile. Mana dị ka atụmatụ igwe kwụ otu ebe na iwu na-agbanwe na triathlon na ịgba ịnyịnya ígwè, anyị na-ahụ ọbịbịa diski brek maka ụzọ na ịnyịnya ígwè triathlon. Na anyị na-gwara na diski brek siri ike, ha bụ ndị ka mma na mmiri, na ha n'ozuzu obi na-adị mma.
Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, ị nwere ike dị nnọọ ewere onye ọ bụla na ha okwu. Mana n'eziokwu, lee ka diski brek si dị mma? Echere m na ọ bụ oge anyị lere anya. (Obi ụtọ na egwu) Maka nke ahụ, m nwere igwe kwụ otu ebe abụọ, otu nwere breeki rim, nke ọzọ na brek diski, yabụ enwere m BMC Teammachine ya na Shimano Ultegra diski brekị, ya na igwe ndị otu.
Na m nwere Cervelo S5 nke nwere Shimano Dura Ace rim brek na yana n'ibu groupet, anụrụ m gị, ana m anụ gị, ha abụghị igwe kwụ otu ebe yabụ na nke a abụghị ezigbo ule sayensị ma m nọ na nke ahụ ọmarịcha ọrịrị a na Lanzarote ka ọ dị ka ọ bụ ihe ihere ịghara inye ha abụọ ezigbo ọfụma, agara m otu taya ahụ, nwee nrụgide taya yiri nke ahụ. Enwere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu igwe kwụ otu ebe na mwube site na igwe kwụ otu ebe gaa igwe kwụ otu ebe. Ma dabara adaba, ha dịkwa oke nha.
Yabụ kedu ihe anyị ga-eme ebe a? “Ọfọn, nke a bụ Tabayesco. Ọ bụ otu n'ime ugwu ndị ama ama ebe a na Lanzarote. Ọ bụ 9.5 kilomita ala ebe enwere ọtụtụ ezigbo ndọghachi azụ, zuru oke maka ịnwale breeki ndị ahụ.
Yabụ, maka ọdịda a, m na braki diski na rim breki nke onye anyị na Shimano. Agbanyeghị, ụdị ndị ọzọ dị ma anaghị m anwale ma ọ bụ lelee brek. Ihe m ga - eme bu igosi ihe di iche na etiti breeki.
Oge elekere njikere. Mbụ m jidere na diski brek, BMC.Run otu, diski brek.
Ka a pụọ. (Obi ụtọ na egwu) Ozugbo m si n'ọnụ ụzọ ámá ahụ, enwere m ọsọ ọsọ. Brek Thezọ ndị ahụ na-amị amị.
Akụkụ ahụ na-aza. Ekpebisiri m ike ikpori ndụ. Na braking mgbe e mesịrị na nkuku na-enyere aka.
M hụrụ ugwu a n'anya. Enwere m ezigbo ire ụtọ. Ee, ugbu a maka ịgba ọsọ abụọ.
All m ga-eme ugbu a bụ na-arụ ọrụ m ụzọ m elu. Ooh. Oge na-esote, rim brek na Cervelo.
Ka a pụọ. (egwu di egwu) Obi ruru ya ala site na mbido. Amaara m nke ọma etu mgbochi brek si arụ ọrụ.
Echiche ha, ebe oke ha dị, ma enwere m obi ike na oge m ga-adaba. Mgbadata ahụ maara nke ọma na egwu a ma enwere m obi ụtọ ịkwanye ya n'akụkụ, ma eleghị anya ọ ga-esiri m ike karịa oge ikpeazụ. Ma nke ahụ pụtara na diski brek nwere ọtụtụ ihe iji gosi.
Ọ dị mma, jiri rim brek gbaa ọsọ abụọ ugbu a, ka anyị tụlee nọmba. Ọ dị mma, nke ahụ mezuru agba ọsọ abụọ ma enwere m oge m ebe a. M bụ n'ezie ise sekọnd ngwa ngwa na igwe kwụ otu ebe na diski brek.
Ihe ị nwere ike ịrụ ụka banyere ya bụ na m gbara ịnyịnya ígwè rim nke abụọ, enwere obere ahụmịhe ma nwekwuo nkwekọ na ọdịda ahụ n'oge ahụ, mana m ka na-agba ọsọ na breeki diski, mgbe ahụ enwere eziokwu na igwe kwụ otu ebe na rim brek bụ ihe aero ọduọ etiti, nke ahụ bụ a omenala ọduọ etiti, ọbụna ngwa ngwa na diski brek ọzọ, otú ahụ bụ n'ezie na-akpali, na onwe m chere na m nwere obere ihe na ya diski brek. Enwere m ike ijikwa ya ntakịrị. Naanị m nwere ike ịme breeki obere oge.
Nke mere na na nke abụọ na-agba ọsọ na rim breeki wheel m n'ezie chefuo breeki a obere n'oge na ọ fọrọ nke nta esiri ihe ole na ole n'akụkụ. Ma ihe ọ bụla, ihe ndị a bụ mmetụta m mgbe ị na-eme braking. Echere m na ọ dị anyị mkpa ịga n'ihu n'ihu ma nwalee ya.
Anyị ga-eme ka a breeki ule mfe, Aga m abịaru nso a akara na wiil abụọ na 30 kilomita kwa awa na-akwụsị ngwa ngwa o kwere omume. (egwu dị egwu) Na na na, otú ahụ ka m mere atọ na-agba ọsọ na diski brek. Mara ezigbo mma ma ọ bụrụ na ị jụọ m. ọ bụ oge maka rim brek. (egwu dị egwu) Ọ dị mma, ya mere dịka ị pụrụ ịhụ na enwere m obere ọfụma ọ bụla na-agba ọsọ na mgbe ikpeazụ m na-agba ọsọ ole na ole, onye mmeri bụ breeki diski, site na ogologo igwe kwụ otu ebe.
Na na na, Mpekere ndị doro anya na a bit mma mgbe ọkọchị. Mana onye ọ bụla na-ekwu na windo dị mma mgbe mmiri dị. Echere m na ọ bụ oge ihe ruru obere mmiri.
Kedu? Ọ bụghị m, naanị wiil! (Obi ụtọ dị ụtọ) Ọ dị mma, nke ahụ mere diski ahụ na mmiri. Obere n'ihu karịa na mbụ. Ugbu a rim.
Ooh. Kpọmkwem, ya mere ndị a bụcha ọsọ m niile. Anyị dekọtara teepu niile, mana ọ kachasị mma.
Ya mere, lee windo m n'ime mmiri, ma ugbu a, anyị ga-eso m gagharịa. Na ebe a bụ rim na mmiri. Obere n'ihu.
Ọ bụ ihe dị ka atọ, ma eleghị anya, anọ wheel ogologo. Ọtụtụ ihe karịa na akọrọ, m ga-etinye aka m ebe a, nke ahụ abụghị ule kachasị mma. Anyị dị n’etiti ndị nọ n’afọ iri na ụma ebe a na Lanzarote.
justin williams ịgba ígwè
Ọ bụghị mmiri mmiri. Anyị mere ya. Thezọ ndị ahụ kpọrọ nkụ.
Anyị mere rim ndị ahụ mmiri. Anyị na-ekpugharị mmiri ntakịrị ọsọ ọsọ. N'ihi ya, ọ bụghị ihe dị ukwuu, ma ihe pụtara ìhè dị iche.] Ya mere, nke ahụ bụ maka taa mere y, na m ga-ekwu na m nwere a oké oge atụnyere diski brekị na rim brek na anyị n'ezie nwere ike ịnọ ebe a ruo mgbe ebighị ebi ịhụ otú ha tụnyere ndị dị iche iche na-agba ịnyịnya , na ọkwa dị iche iche, na usoro dị iche iche, mana m chere na nke ahụ mere ka anyị nwee ọmarịcha mma banyere ihe.
Dị ka m kwuru na mbụ, enwere m mmasị na ike brakes diski siri ike na etu m si achịkwa ha. Otu ihe anyị emetụbeghị aka bụ ịmegharị okwu nkịtị, okwu nkịtị. Mgbanwe ụda olu na-ezo aka na menkpoo na ọdịiche dị n'etiti braking dị nro na ike.
Yabụ site na rim brek, ị ga - achọpụta na ọ bụ obere ihe dị iche ma ọ bụ dọba ebe dọwara adọ n'etiti braking dị nro na braking siri ike. Mana ihe anyị na-ahụ na brek diski bụ na enwere ọtụtụ nso. Ya mere, anyị nwere ike ijikwa braking n'etiti ihe dị nro na nke siri ike ma gbochie anyị ịbanye, nke anyị hụrụ na mbụ na nyocha breeki anyị.
Ya mere, echere m na ọ bara uru m kwuru na m agbafeela rim brek ọrụ m dum, amaara m otu esi agbanwe ha, amaara m otu esi edozi ha mgbe m nwere nsogbu. Diski brek, ọ bụghị nke ukwuu. Mgbe m nwere nsogbu tupu ọsọ ma ọ bụ n'oge agbụrụ dị ka ihe atụ, amaghị m otu esi edozi ya, amaghịkwa m otu esi agba ya.
N'ihi nke a, rim brek ga-anọrịrị m ochie na-eguzosi ike n'ihe, mgbe diski brek na-eche dị ka rim brek ajụkwa nwanne m nwoke. M na-eme ihe ike ike karịa ha. Ọ dị m ka enwere m ike ịme breeki ma emechaa.
Enwere m mmetụta ọsọ ọsọ. Ama m na ị na-achọ azịza maka m, ụjọ na - atụ m na enweghị m otu. Onwe ya, ihe diski diski na-amasị m nke ukwuu m na-eche na ha mana m chere na ọ dị ezigbo mkpa ka ị nwalee ha.
Enwere ike ịgbazite otu n'aka enyi gị ma ọ bụ ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe wee mee ka anyị mara na nkwupụta etu ị si enweta isiokwu ahụ, isi mkpịsị aka, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ndị ọzọ sitere na GTN ị nwere ike kụrụ ụwa pịa ịdenye aha . Ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ otú ị ga-esi okirikiri dị ka pro pịa ebe a n'okpuru. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ nnọkọ na-agba ọsọ na Will Clarke pịa ebe a n'okpuru.
Kedu otu ìgwè Campagnolo kachasị mma?
Isi atọìgwè- Super Record, Record na Chorus - bia na ụdị nke igwe na ntanetị.Ogigena-akpọ usoro kọmputa ya EPS: Electronic Power Shift. Super-Record EPS na-eji UCI WorldTeams UAE Team Emirates, Movistar na Lotto-Soudal.
Kedu ihe bụ Campagnolo AFS?
IheCampagnolo AFSDisc Rotor na-egosipụta ọ bụghị naanị oke arụmọrụ kamakwa nchekwa na ntụkwasị obi site na itinye oke nkwụsi ike na okpomọkụ. IheAFSihe nrụpụta rotor na-eme ka e nwee ntụkwasị obi n'ihi teknụzụ ya na-egbutu, ebumnuche iji nye arụmọrụ mmeri nke agbụrụ na ngwugwu dị fechaa.
Kedu ihe ọghọm nke diski brek?
Iheọghọm nke diski brekkarie uru ndị dị na ya; ha dị oke ọnụ, dị arọ karịa caliperbrekị, gbagwojuru anya ma bulie nsogbu ndakọrịta.Discwiil na-agaghị arụ ọrụ na gị ugbu a anyịnya igwe, na Anglịkan. Enwekwara nsogbu nke nsogbu na ikpochapu ọkụ na ogologo ogologo.Ọgọst 13 2015
Nchara na diski breeki adịghị mma?
Ncharabụ nnọọ nkịtị onbreeki discsn'ihi ihe ha mere - nke a na - agbanyekarị igwe - na ọnọdụ ha n'ụgbọala gị. O di nwute, enweghi otutu ihe ị ga - eme iji gbochie nke aajarisite na-ewuli elu. Easiestzọ kachasị mfe ma kachasị rụọ ọrụ iji kpochapụajarina gịbreeki discsbụ ịkwọ ụgbọ ala.Ọkt 30 2019
Diski brek dị egwu?
Diski breknwere ikedị ize ndụ- Nsogbu nwere ike ibilite mgbe ndị na-agba ịnyịnya n’otu ìgwè na-eji ngwakọta nkediskina rimbrakingusoro, nke pụtara na ụfọdụ nwere ikebreekinwere mmetụta dị iche iche karịa ndị ọzọ. N'oge ụfọdụ, ndị na-agba ịnyịnya ekwuola na ha merụrụ ahụdiski breekina-eso agbụrụ agbụrụ.
Gịnị mere diski brek na-ekpo oke ọkụ?
Isi ihe kpatara nkebreeki diski ekpo oke ọkụ bụesemokwu. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ ọrụ nkebrakingsistemụbudabere na esemokwu, ya na ịkpa ike ịkwọ ụgbọala ịke ọ na-abawanye. Nke a na - eduga na mmụba na ọnọdụ okpomọkụ nkebreeki discsruo 600-700 Celsius.
Olee ụdị diski brekị Campagnolo jiri?
N'ihi nke ahụ Campagnolo họọrọ ịwepụta nhọrọ abụọ na-agbanwe na ntanetị ọhụrụ Ergopower n'okpuru aha ọhụrụ, aha na-enweghị usoro H11 (hydraulic 11 ọsọ) na-eji ihe eji emepụta breeki na-arụ ọrụ na nke Super Record / Record rim breeki levers.
Gịnị bụ ihe dị iche na diski breeki na campy Hood?
Ya mere, ma ị na-agba ịnyịnya ma ọ bụ diski breeki, igwe eletriki ma ọ bụ ụgbọ okporo ígwè, igwe Campy na breeki na-emetụ n'ahụ dị ka mkpuchi Campy ọ bụla dị ugbu a na ihe mkpuchi brake. Agbanyeghị, enwere esemokwu abụọ dị na njikwa diski.
Nke bụ ihe kasị mma diski brekị na ahịa?
Campagnolo's Record 12 diski bụ otu dị egwu. Ihe ndekọ 12 rim brek set bụ n'ihu nke ihe na-abịa n'ihu mana ndekọ Record 12 na-arụ ọrụ ụfọdụ. Ọ bụ ihe nkpuchi breeki okporo ụzọ kachasị mma m jirila na nke kachasị mma n'ibu na-agbanwe agbanwe. Ergonomics na n'ihu derailleur ije adịchaghị mma mana ọ ka dị mma.